Shiinaha Ball Mill soosaarayaasha iyo alaableyda | Mets
Mashiinka kubbadda wuxuu ka kooban yahay qeybta quudinta, qeybta quudinta, qeybta wareejinta, qeybta gudbinta (soo-dhimista, qalabka gudbinta yar, mootada, koontaroolka korontada) iyo wixii la mid ah. Godka godka waxaa laga sameeyay bir bir ah, dahaarka waa la beddeli karaa, qalabka wareejintana waxaa laga sameeyaa ilkaha duuban ee jilayaasha. Foostadu waxay leedahay dahaadh dahaarka iska caabiya, oo leh iska caabin wanaagsan oo duug ah. Mashiinka waa mid deggan oo la isku halleyn karo.Billadaha martida loo yahay oo ay ka mid yihiin silsilad, jirka silsiladda leh dahaarka waxtarka leh ee laga sameeyay maaddada u adkeysata dharka, waxay leedahay oo ay ilaalisaa sidkeeda wareejinta silsiladda, waxay leedahay qeyb ka mid ah, sida matoorka, iyo qalabka gawaarida, wiishka, saddexagalka, iwm
Ku saabsan loo yaqaan 'qaybaha daab', guud ahaan ma aha qaybaha ugu muhiimsan, qaybaha ku yaal barta dhamaadka quudinta ee leh gudaha gudaha iyaga oo ku daboolaya daab, waxaa la dhihi karaa qaybaha dhamaadka dheecaanka ka sii deynaya afka leh fur gudaha ayaa ugu yeeri kara iyaga lafta muquuninta.
Intaa waxaa sii dheer, qalabka caawinta ee dhamaadka soo deynta, haddii loo isticmaalo gawaarida wareegga ah, waxaa jiri doona qaybo loogu yeero aaladaha muquuninta, laakiin si adag markaan u hadlo, qeyb kama ahan qalabka wax lagu sameeyo. Mashiinka qallalan ee qallalan iyo dhagax qoyan oo qolof leh ayaa loo dooran karaa iyadoo loo eegayo habka iyo habka bullaacadaha. Mashiinka kubbadda ee keydinta tamarta, iskuxidhka tooska ah ee isku-dhafan laba-geesoodka udub-dhexaadka ah, caabbinta orodka ayaa yar, saamaynta keydinta tamarta waa mid cajiib ah Qaybta jirka ee foostada ee foosto asalka ah waxaa lagu daray silsilad koonto ah, taas oo kordhinaysa mugga waxtarka leh ee miraha oo ka dhigaysa qaybinta dhexdhexaadka tuubada mid macquul ah. Badeecadani waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa biraha aan birta ahayn, birta birta ah, biraha ka faa'iideysiga biraha, warshadaha kiimikada iyo warshadaha qalabka dhismaha.
Ku rakibida dhalada Ball:
A) qorshaha rakibaadda waxaa loogu talagalay iyadoo loo eegayo injineernimada aasaasiga ah ee isticmaalaha waana in lagu rakibaa jihada, goobta iyo booska jaantuska;
B) diyaaradda hoose ee fuselage waa inay ahaato mid adag, oo flatness-ka diyaaradda hoose ee dhululubadu kama weyna 1.5 / 1000 kadib hagaajinta jiifka.
A) ka saar walxaha salka qalabka rakibida, gaar ahaan derbiga gudihiisa ee daloolka waa inuusan lahayn boodh, saliid, biyo iyo cabitaanno kale;
B) Ka dib marka la furfuro kiisaska baakadka, mashiinka ugu muhiimsan waa in loo wareejiyaa booska rakibida iyadoo la raacayo tas-hiilaad ku habboon (wiish / forklift);
C) dhig qalabka meel, godadka kuraasta lagu xiro, iyo "cagaha nool" ee suunka bakhtiyaa nasiibka ah waa in lagu xiraa jiiska dhismaha ka dib marka lagu xiro shaashadda qafiska, ka dib ayaa la samayn karaa qashin-qubka labaad;
D) kadib marka la rakibo 24 saacadood oo sibidh ah, waxaa loo isticmaali karaa in lagu adkeeyo mashiinka tijaabada culeyska lowska;
E) helitaanka awood;
F) kormeerka rakibida iyo sixitaanka raaxo la'aanta;
G) armaajooyinka korontada waxaa la dhigaa qolka mashiinka caawiyaha iyadoo aan loo baahnayn in dabaqa la dhigo.
2. Hawlgalka tijaabada:
Rakibaadda dhagaxa kubbadda waa la dhammeystiray, kormeerka, wuxuu noqon karaa tijaabo madhan, hawlgelinta milkiilaha kubbadda ee xirfadleyda milkiilayaasha kubbadda xirfadda leh waa inay mas'uul ka ahaadaan, milkiilaha kubbadda oo ay si adag ugu hoggaansamaan hannaanka hawlgalka amniga.
(1) waqtiga socodsiinta hawlgalka bilaa camalka ahi waa inuusan ka yarayn 12-24 saacadood, iyo dhibaatooyinka hawlgalka waa in lagu xaliyaa waqtiga.
(2) socodsiinta shaqada ee hawsha ee tijaabada culeyska caadiga ah, waa la fulin karaa marka tijaabada culeyska ay socoto wejiyada kasta, hawlgalka xamuulka waa in lagu sameeyaa iyadoo loo eegayo xaaladda dheecaanka quudinta, ka fogow kubad shiidan oo aan loo baahnayn iyo qalabka silsiladda iyo waxyeelo.
A) ku dar maaddooyinka ku habboon iyo 1/3 ee kubbadaha birta ah (culeyska ugu badan ee milkiilaha kubbadda) si aad isugu daydo 12 illaa 24 saacadood.
B) ku dar ilaa 2/3 qadarka kubbadaha birta ah si ay u socdaan 24 ilaa 48 saacadood.
C) iyadoo la raacayo shuruudaha dheecaanka dhagaxa kubbadda, soosaarka alaabooyinka u qalma, iyadoo la tixraacayo isla nooca mashiinka-milkiilaha xaddiga xamuul ee dhabta ah, go'aamiya tirada kubbadda kubbadda ee mashiinka wax lagu shiidayo, ugu yaraan 72 saacadood oo tijaabo ah.
(3) kororka culeyska kor ku xusan iyo dhererka waqtiga orodka tijaabada waxaa lagu go'aamiyaa iyadoo lagu saleynayo xaaladaha socodka ee marshada cabirka qalabka iyo hoos u dhigista qalabka (kor u kaca heerkulka, buuqa, xiriirka dusha ilkaha, iwm.). Kahor saxnaanta xiriirka dusha ilkaha uusan buuxin shuruudaha naqshadeynta, kuma shaqeyn doono karti buuxda.
(4) nidaamka qaboojinta iyo saliidaynta waa inuu si caadi ah ugu shaqeeyaa hawlgalka baaritaanka, heerkulkiisuna yahay kan ugu muhiimsan, dhalista gudbinta iyo hoos u dhiguhu waa inay caadi ahaadaan.
(5) kadib markaad buuxisid 2/3 tijaabada kubbadda birta ah 24 illaa 48 saacadood, hubi oo adkee dhammaan boodhadhka markale.
(6) hawlgalka tijaabada waa in si taxaddar leh loo duubo.
Isku darka, shiidi, qalabka wax lagu shiido ayaa badanaa loo isticmaalaa qalabka dhoobada waa qalab lagama maarmaanka u ah soo saarida noocyada kala duwan ee alaabada dhoobada, mashiinku wuxuu ISTICMAALAA walaaca isku xidhka ah, yareeyaa hada bilowga, qaab dhismeedkiisu wuxuu u qaybsan yahay mid muhiim ah oo ka go'ay. Iyada oo wadista v-suunka, hal-marxalad ama laba-laabid, lagu qalabeeyay matoor awood yar oo madax-bannaan.
Xiga: Gacanta usheeda dhexe